Ireo Zazakely Mahazo Zazakely: Tsy Misy Sekoly Ho An’ireo Vady Tanora Any Nepal · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Marsa 2015 7:09 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, 繁體中文, 简体中文, Ελληνικά, українська, English
Ireo ankizivavin'ny vondrom-piarahamonina Newar, miakanjo nentim-paharazana fitondra amin'ny fanambadiana, mandray anjara amin'ny Bael Bibaha, fomba fanao izay hampanambadiana zazavavy kely amin'ny voankazo bael. Tsy fanambadiana zazakely akory io, fa kosa fomba fanao nentim-paharazana izay midika fa rehefa manambady izy ireo (sahala amin'ny olon-dehibe), tsy ho mananon-tena mihitsy izy ireo satria efa efa nampanambadiana tamin'ny endrik'andriamanitra (ilay voankazo) fony fahazaza. Fizakamànana Demotix (3/12/2011)
Zava-misy mahamenatra any Azia Atsimo ny ankizy-ray aman-dreny, izay mbola miparitaka tokoa ny fampanambadiana ankizy na dia eo aza ireo ezaka ataon'ny governemanta sy ny fiarahamonim-pirenena mba hiadiana aminy. Amin'izany toe-javatra izany, ireo ankizy vavy indrindra no tena miaritra izany, tratra ao anatin'ny fandriky ny fahantràna noho ny fampiatoana tampoka ny fampianarana azy ireo, ary mamandrika ireo zanany haterany aty aoriana, ao anatin'ny tranga mitovy amin'izany.
#FridayFact: Worldwide, about 1 in 4 women were married before age 18, with the highest rates of #childmarriage in South Asia. @UNICEF
— Girl Summit (@GirlSummit) January 16, 2015
#FridayFact: Maneran-tany, eo ho eo amin'ny 1 amin'ny vehivavy 4 no nanambady mialoha ny faha 18 taonany, any Azia Atsimo ny tahan'isa ambony indrindra amin'ny #childmarriage (fanambadiana ankizy). @UNICEF
‘Nepal has the ninth highest prevalence of child marriage in the world with one in every three child brides… http://t.co/mKpewTk9ix
— Kim Kamzang (@kamzang) February 26, 2015
‘Nepal no faha sivy manana taha ambony indrindra amin'ny fanambadiana ankizy eto an-tany, izay ahitàna ankizy vavy iray amin'ny mpanambady telo…
Ny taona lasa teo, latsaky ny 15 taona ireo vinanto vavy miisa 4.000 tany Nepal, na dia eo aza ny taona ara-dalàna hanambadiana ho an'ireo vavy sy lahy ho 18 taona miaraka amin'ny fanomezan-dàlan'ireo ray aman-dreny ary tsy mila izany kosa ny 20 taona.
Miantefa matetika amin'ilay saranga ahilikilika indrindra ara-tantara, ireo “dalits”, (fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe ‘ireo tsy azo kitihana’ noho ny toerana misy azy ao anatin'ny rafitra Hindu efa miha-maty mikasika ny fizarazaràn'ny foko), dia matetika no atao antsokosoko ny fanambadiana ankizy; noho ny filàna ny fombafomba amin'ny ampahany sy fivoaham-bola amin'ny ampahany ihany, any amin'ny lemaky ny atsimon'ny firenena, fantatra amin'ny hoe Terai. Mampiseho ny antontanisa ny taona 2012 fa avy any amin'ny faritra atsinanan'i Terai ny maherin'ny antsasak'ireo fanambadiana ahitàna ankizy vavy latsaky ny 12 taona,
#Nepal abolished child marriage 50 yrs ago. Yet, 4 out of 10 women get married before 18. Rejection=abduction. http://t.co/F3CL1CjIip
50 taona lasa izay, efa nofoanan'i #Nepal ny fanambadiana ankizy . Na izany aza, 4 amin'ireo vehivavy 10 no nanambady latsaky ny 18 taona. Fandàvana=Fakàna an-keriny.
Vao manambady ireo ankizy vady, tsy maintsy miandraikitra eo noho eo ireo andraikitry ny olon-dehibe, apetraky ny fiarahamoniny amin'izy ireo. Iray amin'ireo zavatra andrasana lehibe indrindra ny fiterahana — na hita aza fa mbola tsy vonona ara-batana sy ara-tsaina amin'izany izy ireo.
Araka ny Tahirmbolan'ny Firenena Mikambana Ho an'ny Mponina (UNFPA), rehefa bevohoka ny tanora iray tsy ampy taona, avo in-dimy heny amin'ny an'ny vehivavy eo amin'ny faha-roapolo taona ny tahan'ny mety hahafaty azy mandritra ny fotoana iterahana.
Aorian'ny fahaterahany, tena kely ny vintany hoe ahafahany manohy indray ny fianarany, mamela azy hianjadian'ny tsy fahaizany mamaky teny sy manoratra, fanararaotana ara-nofo sy ara-tsaina, ary ny fahantrana.
Araka ny tatitry ny Fiaraha-miasa Maneran-tany ho an'ny Fampianarana, ny taona 2014, 57% ihany ny tahan'ny fahaizan'ireo vehivavy mamaky teny any Nepal, oharina amin'ny taha 75% ho an'ireo lehilahy, noho ny taha ambonin'ny fialàna amin'ny fianarana ao amin'ny firenena. Fanampin'izay, asehon'ny fanadihadiana fa ireo ankizivavy manambady mialoha ny faha 15 taonany, dia manan-janaka telo na mihoatra raha oharina amin'ireo vehivavy 20 sy 24 taona.
Ny dôty – fanomezana raisina mandritry ny fampanambadiana azy no antony iray lehibe indrindra amin'ny fampanambadiana zazavavy kely mbola tanora, na ny vola tokony alohan'izy ireo amin'ny fianakavian-dralehilahy.
Raha miha mitombo sy mahazo fampianarana bebe kokoa ny ankizivavy iray, miha mitombo araka izany koa ny dôtiny. Hita tokoa, fa amin'ny vola aloa mitentina 200 dolara ka hatramin'ny 20.000 dolara amerikana, miankina amin'ny taonan'ny ravehivavy sy ireo traikefa ananany, tsy marisika ny handefa ireo zanany vavy any an-tsekoly ireo ray aman-dreny mahantra. Ireo rafozany, izay tsy mahay mamaky teny ihany koa, dia hanery azy amin'ny lafiny rehetra hiatrika bebe kokoa ny asa ao an-tokantrano. Izany no mahatonga ireo manam-pahaizana sasany nanamafy fa ny tsara indrindra entina hiadiana amin'io fomba io dia ny fanenjehana ireo fianakaviana, nefa mety sarotra ihany ny mampihatra lalàna any amin'ireo faritra izay voafetra ihany ny fahafahan'ny fanjakàna miditra.
Sarotra ny mitsoaka. Anefa mety afaka miverina an-tsekoly ihany ireo sasantsasany, sahala amin'ilay zaza dalit 13 taona nalaina an-keriny, izay sady natanja-tsaina no nanam-bitana.
Miaritra ihany koa ireo ankizilahy. Manazava i Shashank Bengali, mpisolo tena ny “Los Angeles Times” ao Azia Atsimo, fa any amin'ireo fianakaviana maro anaka dia fomba malaza entina handrindràna ny fananahan'ireo ankizilahy ary hialàna amin'izy ireo ny fampanambadiana ankizy.
Saingy eo amin'ny faha 13 taonany, maro ireo miampita sisintany mankany India mba hitady asa toy ny mpiasa madinika mpila ravinahitra, mamela ireo vadiny sy ireo zanany ao an-trano hiatrika samirery ny fiainany.
Manapaka ny tsingerina
Miaraka amin'ny vokatr'ilay fomba fanao vita fanadihadiana tsara, maro ireo manontany tena momba ny tsy fahampiana goavana amin'ny fivoaran'ny ady amin'ilay fomba fanao:
C is Sonakshi Malik, married, child marriage is rampant in Nepal, why the government is unable to stop it??? pic.twitter.com/f70q8sOLmn
— Randhir Chaudhary (@randhirktm) July 21, 2014
Izy no Sonakshi Malik, manambady, mihanaka ny fampanambadiana ankizy any Nepal, nahoana ny governemanta no tsy mahavita manajanona an'io???
Nanandrana niady tamin'ilay rafitra fampiharana ny dôty ny governemanta ao Nepal sy ireo olom-pirenena mafana fo:
Please Watch & Make Your Commitment Social Norms Change Video to End Child Marriage & Dowry in Nepal: http://t.co/BLM1rlumvz via @YouTube
— Raj Kumar Mahato (@rkmahato5) October 13, 2014
Mba Jereo Azafady Ary Raiso Ny Andraikitrao Amin'ny Tokony Ovàna eo amin'ny Fiarahamonina, Lahatsary Hamongorana Ny Fampanambadiana Ankizy & Dôty any Nepal
Total 146,000 NPR contribution received in Child Marriage & Dowry Eradication National Campaign, Nepal to date. pic.twitter.com/G7rya2N2rK
— Raj Kumar Mahato (@rkmahato5) November 17, 2014
Hatramin'izao, miisa 146.000 NPR ireo fanomezan-tànana voaray amin'ny Hetsika Nasionaly ho Famongorana ny Fampanambadiana Ankizy & ny Dôty, any Nepal.
Voabahan'ireo zava-misy hafa anefa ireo ezaka ireo, toy ny zava-misy hoe feno ankizy loatra ireo sekoly, tsy lazaina intsony ny hoe matetika lavitra be miala ny tanàna izy ireny, izay mahatonga ny safidy handeha an-tsekoly ho manahirana be.
Fa misy ny fanantenàna.
Hatry ny taona 2009, natao ho maimaimpoana ho an'ireo ankizivavy ny sekoly hatramin'ny taona faha-folo. Nahatonga ireo tantara tsy ampoizina toy ny hoe mahazo fahaleovan-tena ireo ankizivavy amin'ny filalaovana baolina kitra, na hoe tompon'ny fandaharana ny fanambadiany izy ireo raha ny marina.
Ny sasany mahita fa mihamitombo sy lasa afaka atao ny fotoana ‘fifankahafantarana’ noho ny fidiran'ny kolontsaina hindi Bollywood sy ny finday:
A staggering 41% of women in Nepal get married before they turn 18. What do you do when it's by choice? http://t.co/WAdO1rLwip
— Prerana Shrestha (@prerana123) February 28, 2014
Mahatalanjona fa manambady mialoha ny faha 18 taonany ny 41% amin'ireo vehivavy any Nepal. Inona no ataonao raha safidy no nanaovana izany?
Manome sosokevitra ireo zatovo miasa ho mpisolovava any amin'ny faritra andrefan'i Nepal, fa ao anatin'ny fiarahamonina fanjakan-dehilahy toa an'i Nepal, tokony ho vaindohan-draharaha ankehitriny mihitsy ny fanomezana fahaleovan-tena ireo ankizivavy mba hampisy fiovàna:
Watch what adolescent girls of #Nepal‘s Kapilvastu, Kavre and Sindhupalchowk districts say about #childmarriage: http://t.co/3ehsX6BFfl
— UNFPA Nepal (@UNFPANepal) January 6, 2015
Jereo ny lazain'ireo zatovovavy ao amin'ny distrika Kapilvatsu, Kavre sy Sindhupal ao #Nepal momba ny #fanambadianaankizy
Mitaky ezaka bebe kokoa ny fanatsaharana ny fomba fanao fampanambadiana ankizy:
Multi-sectoral interventions are needed at all levels to end #childmarriage in South Asia, says @UNFPANepal Rep. pic.twitter.com/pzVjDRKuWj
— UNFPA Nepal (@UNFPANepal) November 7, 2014
Ilaina ny fidirana an-tsehatra avy amin'ireo sehatra maro, amin'ny ambaratonga rehetra mba hampiatoana ny #fampanambadianaankizy any Azia Atsimo, hoy @UNFPANepal Rep.
Ny volana Novambra ny taona 2014, ireo governemanta ao anatin'ny Fikambanana Fiarahamiasam-Paritra ao Azia Atsimo (SAARC) dia nanohy ny fanaraha-maso ny fampiharana ny Tetikadim-Paritra ho Fampiatohana ny Fampanambadiana ankizy, ny volana Aogositra 2014, miaraka amin'ny Antso Kathmandu ho Fandrisana Andraikitra mba Hampiato ny Fanambadiana Ankizy any Azia.
Manohana ilay tanjona manokana hanatsaharana ny fampanambadiana ankizy ireo tetikady ireo, amin'ny alalan'ny fampiasàna ny fifehezan'ny lalàna sy ireo tetikady araka ny lalàna, izay mampiroborobo ny fandraisana andraikitra mba hampitsaharana ny fampanambadiana ankizy.
Antenaina fa hisy fiantraikany mafy ireo dingana vaovao ireo.
Mamelona fanantenàna ho antsika ito bitsika farany ito, hoe na na firy taona aza ny olona, mbola afaka manana fomba fijery vaovao foana:
“My granddaughters will marry after school.” Some elders discussed school and #childmarriage…we listened. #Nepal pic.twitter.com/oo3X9HIMvT
— Aura Freedom (@AuraFreedom) February 4, 2015
” Rehefa vita ny fianarany, hanambady ireo zafikeliko vavikely.” Niresadresaka momba ny sekoly sy ny #fampanambadianaankizy ireo zokiolona sasany…nihaino izahay. #Nepal